माडीका वडाध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन,अयोध्यापुरीको काम के हुँदै छ? « रिपोर्टर्स नेपाल
माडीका वडाध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन,अयोध्यापुरीको काम के हुँदै छ?
चितवन, साउन २४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामजन्मभूमि अयोध्याका विषयमा चासो अगाडि बढाएका छन् । उनले शुक्रबार माडी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीलाई टेलिफोन गर्दै अयोध्यापुरीको अध्ययन गर्न अनुरोध गरेका छन्।